Tag: you're doing it wrong | Martech Zone
Tag: urikuzviita zvisirizvo
Uri Kuzviita Zvisirizvo!
Chitatu, Nyamavhuvhu 19, 2009 Svondo, Kubvumbi 24, 2016 Chris Lucas
Sevashambadzi isu tese tinonyatso kuziva nezvekuti zvakaoma sei kuchinja hunhu hwevanhu. Icho chimwe chezvinhu zvakaomesesa iwe zvaunogona kuedza kuita. Ndicho chikonzero Google, ikozvino, ichanakidzwa nekuenderera mberi kwekutsvaga kubudirira, nekuti vanhu vajaira "Google iyo" pavanoda kutsvaga chimwe chinhu pawebhu. Kuziva izvi, ndinonakidzwa nenhamba yevanhu vandinoona paTwitter nemablog ari kuudza vamwe